DKMG ah iyo Alshabaab oo Guulo ka kala sheegtay weerarkii xalay Garbaharey – SBC
DKMG ah iyo Alshabaab oo Guulo ka kala sheegtay weerarkii xalay Garbaharey
Wararka laga helayo degmada Garbahaareey ee xarunta gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi ay ka taagan yihiin xaalado ka dhashay weerar habeenimadii xalay ay halkaasi ku soo qaadeen xoogaga xarakada Alshabaab.
Inkastoo xaalada deegaanka ay tahay mid degen hadana waxaa la dareemayaa dhaq dhaqaaqyo ay ciidamada DKMG ah iyo kuwa Ahlusuna ee ku sugan deegaankaasi ay sameynayaan .
Xalay ayay aheyd markii ciidamo ka tirsan xarakada Alshabaab oo aad u hubeysan ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada DKMG ah ay ku leeyihiin gudaha Garbahaareey, waxaana dhashay israsaaseyn mudo 8 saacado ah socotay taasi oo ay lsku adeegsanayeen labada dhinac hubkanoocyadiisa kala duwan .
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo deegaanka ayaa sheegaya in dagaalkii dhacay ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 5 qof oo labada dhinac isugu jira, waxaana jira dhaawacyo la gaarsiiyay isbitalka weyn ee deegaanka .
Saraakiil ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta ALshabaab oo saxaafada gobolka la hadlay ayaa sheegay in weerarkii xalay ay ku qaadeen Garbahaareey uu u dhacay sidii loogu talagalay iyadoona ay ciidamada DKMG ah iyo kuwa Ahlusuna fariisimadii ay ku weerareen kagala wareegeen hub iyo saanad kale.
Dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidamada Ahlusuna iyo kuwa DKMG ah eek u sugan Garbahaareey ayaa dhankooda sheegtay in weerarkii la soo qaaday ay iska difaaceen iyagoona intaasi raaciyay in ay khasaare u geysteen dhinacyadii soo qaaday.
Dhowaantan ayay aheyd markii iska horimaadyo ceynkan oo kale ay ka dheceen deegaano hoostaga gobolka Gedo kuwaasi oo ay ka dhasheen khasaarooyin labada dhinac soo kala gaaray.